Sharciyaqaan waa xirfad xakamaysan Iswiidhan dhexdeeda. Taas macneheedu waxa weeye in sharciyaqaan haysta qalinjabin dal kale oo raba inuu uga shaqeeyo Iswiidhan si la mid ah sida qof haysta qalinjabin Iswiidhish ah, ay tahay inuu helo taas. Xirfadaha qaarkood sida qaaddiga, qareenka iyo xeer ilaaliyaha, waa qasab in la haysto qalinjabin Iswiidhish ah. Qalinjabinta sharciga ee Iswiidhan waxay u dhigantaa afar sano iyo badh waxbarasho buuxda ah.
Qiimaynta qalinjabinta dal kale
Qiimayn lagu sameeyo shahaado dal kale waxa sameeya guddiga jaamacadaha iyo macaa'hidda sare.
Sida lagugu qiimeeyo waxbarashadii dalka shisheeyaha awgeed, waa inaad codsi iyo qoraallada rasmiga ah u soo dirta UHR. Barta internetka utbildningsbedomning.uhr.se, waxaad ka heleysa arjiga ku salaysan farsamada elektroonikada. Halkaas ayaa arjigaaga ka soo gudbin karta. Qoraalada rasmiga oo midab leh haddii suuragal tahay ayaa arjigaaga ku soo lifaaqi karta.
Teeda kale, waxaad u baahan tahay inaad soo dirto dhar qoraallo kala duwan.
Qoraalada laga soo saarada dalalka Waqooyiga Yurub ama ku tujuman af-ingriisi, af-fransi, af-isbanish ama af-jarmal looma baahna in la turjummo. Kuwa kalena waa in u soo turjummad turjubaanada qoraalada ee shatiyada u haysto xirfadooda. Xafiiska Shaqada wuxuu xaaladaha qaarkood ka caawini kara turjumida.
Waxbarasho dhammaystir ah
Haddii qofku rabo qalinjabin sharciyaqaannimo oo Iswiidhish ah, wuxu dalbanayaa waxbarashooyinka sharciga ee Iswidhan midkood. Wakhti xaadirkan waxa bixiya waxbarashada sharciga lix jaamacadood oo Iswiidhan ah. Kuwaasi waa Jaamacadda stockholm, jaamacadda Göteborg, jaamacadda Uppsala, jaamacadda Lund, jaamacadda Umeå iyo jaamacadda Örebro. Haddii qofka loo qaato barnaamijka waxbarasho, wuxu markaa codsan karaa in waxbarashadiisii dalka kale loo xisaabiyo. Sida caadiga ah waxa loo baahayey in Iswiidhan wax lagu barto saddex sano ilaa saddex sano iyo badh.
Jidka gaaban (Korta vägen)
Kala doorasho kale aan lagu helin qalinjebinta cadaaladda, oo laakiinse sare u qaada fursada shaqo ka helida laamaha xirfadaada waa tababarka suuqa shaqada ee loo yaqaanno Korta vägen.
Xirfadaha sharci yaqaannimada
Cilmiga sharciyada ee kulliyadda iyo jaamacadda